Homeसमाचारभो’कै बस्दा किन पेट कराउँछ ? जानुहोस्….
August 22, 2020 admin समाचार 20335
कहिले’काहिँ पेट कराएको महसुस गर्नुभएको होला । अक्सर धेरै बेर खालीपेट रहँदा वा खराब खान’पानका कारण पेट कराउने गर्दछ ।
मेडिकल भाषामा यसलाई बोरबो’रिग्मी भनिन्छ । अन्य कार’णभन्दा लामो समय भोको रह्यो भने तुलनात्मक रुपमा बढि पेट कराउने गर्दछ । तर किन कराउँछ पेट ?
पेटले निय’मित रुपमा हामीले खाएको खानालाई पचाउने काम गर्दछ । खाना पचाउन पेटलाई औसतमा ३/४ घण्टा समय लाग्दछ ।
कतिपय अवस्थामा खानाको परीका’रले यो समय हेरफेर हुनसक्छ । यस्तोमा हामीले धेरैबेरसम्म खाना नखादाँ पेट खाली भएको हुन्छ ।
जसका कारण खाना पचाउन पेट खुम्चिने गर्दछ । तर खाली पेट भएको हुनाले केवल ग्याँस मात्र भेटिन्छ । र खाली पेटमा ग्याँस र पेटबाट निस्कि’एका पाचन रसबीच घ’र्षणले आवाज आउँछ । यसैलाई हामी पेट कराएको भन्ने गर्दछौ ।
तर भोक लागेको हरेक पल्ट हाम्रो पेट कराउँछ भन्ने हुँदैन । भोक लाग्नुको अर्थ हो, शरीरले आवश्यक पोषण माग्नु । साथै भोकलाई नियन्त्रण गर्ने भाग हाम्रो म’स्तिष्कमा रहेको हुन्छ ।
यस्तो’मा हाम्रो शरीरमा पोषण कम हुने बित्तिकै पेट र आन्द्रामा विशेष संकेत पुग्दछ र हामीलाई भोक लाग्न थाल्छ ।
पेट कराएको बेला पेट र आन्द्रा निकै सक्रिय हुन्छ । यस्तो बेलामा जे खाए पनि हता’रहतार पचाउने कोसिस गर्दछन् । अर्थात पेट र आन्द्रा आफ्नो काममा सक्रिय हुन थाल्दछन् ।
यस्तो बेला खाना पूर्ण रुपमा नपच्न सक्छ । तसर्थ लामो समय भोको रहेपछि शुरुमा केहि स्वा’स्थ्य खाने’कुरा खानु उपयुक्त हुन्छ ।
September 27, 2020 admin समाचार 10927
प’छिल्लो २४ घण्टामा देशभर १० जना कोरोना संक्रमि’तको मृ त्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा ज’नसंख्या मन्त्रालय’का अनुसार मृ त्यु हुनेमा ९ जना पुरुष र १ जना म’हिला रहेका छन् । जसमा काठमा’डौंकी ५० वर्षीया
December 12, 2020 admin समाचार 5797
October 10, 2020 admin समाचार 9723